မောင်တိုင်ပင် ဧ။် အတွေးပုံရိပ်များ: April 2010
လျှပ်တပျက် စင်ကာပူ (၃)
စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာများဟာ အလွှာပေါင်းစုံမှာ ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရှိသင့်တဲ့ middle class လူတန်းစားဟာစင်ကာပူမှာအများစုလာရောက်ဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အာအိုင်တီ ဆင်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေစင်ကာပူမှာ ဘွဲ့လွန်ပညာရပ်တွေဆည်းပူးခဲ့ ကြပြီး စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာကောင်းကောင်း နေနိုင်စားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူ ရဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ environment ကိုမြန်မာ ပညာရှင်အများစု ကမကြိုက်ကြပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခြား သြစတေးလျ လိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့ ယှဉ်ရင် stress အရမ်းများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အများစုကတော့ PR ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။သမီးတို့ လိုပဲ စင်ကာပူမှာ လင်မယား နှစ်ယောက်လုံးအလုပ်လုပ်နေရင် PR ရအောင် ကြိုးစားကြပါတယ်။ လင်မယား ၂ယောက်လုံး PR ဖြစ်မှစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေပြန်ရောင်းတဲ့ HDB အခန်းတွေ ကို ပြန်ဝယ်ခွင့် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ HDB အခန်းငှားရမ်းခဟာ ၂ယောက်ပေါင်း ပျမ်းမျှ ၀င်ငွေ ရဲ့ ၃၀-၃၅%လောက်ရှိနေလို့ပါပဲ။ HDB တိုက်ခန်းဝယ်လိုက်ရင်လည်း ငွေချေးလို့ရမယ်။ အတိုးပေးရ တာက အိမ်လခတက်သက်သာတော့ တွက်ချေကိုက်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်စေ့ ရင်တိုက်ခန်းကို
စင်ကာပူမှာ တယ်လီဖုန်း၊လျှပ်စစ်၊အင်တာနက်၊ အခွန်၊အိမ်လခ တွေအားလုံး on line ကပဲ ပေးသွင်းပါတယ်။ bill တွေပေးသွင်းတဲ့ AXS machine တွေကို HDB တိုက်ခန်းအုပ် စု တွေအောက်မှာထားရှိပေးထားပါတယ်။ သမီး က bill တွေသွားပေးမယ်၊ လိုက်ကြည့် ပါလား လို့ ပြောတော့ သမီးနဲ့ တူတူလိုက်သွားကြည့်မိတယ်။ အားလုံး လွယ်လွယ်လေးပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁-၂ နှစ်လောက်က စာရေးသူ GSM ဖုန်း ခဏခဏပိတ်ခံရတယ်။ ငွေသွင်းဖို့မေ့မေ့ သွားလို့ပါ။ ဒါနဲ့ MPT ဘတ်ဂျက်ဌာနက အရာရှိမ ကို bill ကုန်ခါနီးကြရင် တယ်လီဖုန်းကို remind လုပ်ပေးပါ လားလို့ပြောမိတယ်။ ဘာပြန်ပြောသလဲ ? GSM တယ်လီဖုန်းတွေ ကအများကြီးအဲဒီလိုလိုက်လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ လုပ်ဖို့ လူလည်းမရှိဘူး၊ငွေလည်းမရှိဘူးတဲ့။ ဒါတောင်စာရေးသူ က ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခု က senior level officer တစ်ယောက်မှန်းသိ လို့သာ ဒီလောက်ပြောတာ၊ရိုးရိုး သူလိုငါ လိုပြည်သူ ဆိုရင်စကြာဝဌာ တံတိုင်းအပြင် ဘက်လွင့်လောက်အောင်အော်ထုတ်ပစ်မလားမသိပါ။ MPT က middle level officerတဲ့ဗျာ။ကွန်ပျူတာတွေဒီ
လောက်သုံးနေတဲ့ ဌာန၊ လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်နိုင်တာမလုပ်ပေးပဲ လူမရှိလို့ ငွေ မရှိ လို့ များ ပြောတာကတော့ လွန်လွန်းသဗျာ။ လုပ်ပေးကိုင်ပေးချင်စိတ်ကို မရှိတာလို့ ပြောရင်လက်ခံပါ သေးတယ်ဗျာ။ အခုကြတော့ GSM မှာ sms တစ်ခါတစ်ခါ ပို့ ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖုန်းခေတ္တပိတ်ခံရမှာ စိုးတော့ဖုန်းရုံးသွားသွားစုံစမ်းနေတော့ မနိပ်ပါဘူး။
စာရေးသူဟာ ကုန်သွယ်လယ်ယာမှာ၂၀၀၄ ခု GMဘ၀ထဲကတည်း ကGSM ဖုန်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကုန်သွယ် /ဦးစီး ကို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်နဲ့ ပြောင်းလာသည်အထိမရသေးပဲ ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင်ထောက်ခံမှ ၂၀၀၆ ကုန်ခါနီးလောက် ၁၅ သိန်း ဖြစ်သွားချိန်မှာ ဒီကနေ့ ကိုင်နေတဲ့ GSM ဖုန်း ငှားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ စီးပွား /ကူးသန်း က အရာရှိကြီးတစ်ယောက် GSM ဖုန်းလျှောက်တာ ၃နှစ်လောက် ကြာပါတယ်။ ကိုယ့်လက် အောက်က ဗိုလ်မှုးတစ်ယောက်ကတော့ ခုလျှောက် ခုရ ခဲ့ တယ်လို့ပြောတာပဲ။ ကိုယ်ကတော်တော်ညံ့ တဲ့ အထဲမှာ ပါနေ တယ်နော်။ စင်ကာပူမှာ တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီကြီး ၃ခုရှိပါတယ်။ SingTel,M1 နဲ့ StarHubပါ။ StarHub နဲ့ကန်ထရိုက်ချုပ်ပါတယ်။ ကနဦးတပ်ဆင်ခက မြန်မာလို၁၅ သိန်း (US ဒေါ်လာ ၁၃၀၀ လောက်) မပေးရပါဘူး။
သမီးကျောင်းတက်နေတုံးက PR တစ်ယောက်ထောက်ခံရင် deposit S$ 200 သွင်းပြီး ဖုန်းလျှောက်လို့ရတယ်။ သမီးPR ဖြစ်တော့ ၂၀၀ ပြန်ရပြီးဖုန်းအတွက် ၂၅၊ roaming အတွက် ၅နဲ့ caller ID အတွက် ၅ ဒေါ်လာ စုစုပေါင်း ၃၅ ဒေါ်လာ (မြန်မာငွေ ၂၅၀၀၀ ကျပ်) ပဲသွင်းရပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေက တယ်လီဖုန်း ခေါ်ဆိုခပေါ်မှာ ပဲ စားကြပါတယ်။ ခေါ်ဆိုခလည်းဈေးကြီးပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ SMS ကို၁၀ခုလောက်အခမဲ့ခွင့် ပြု တော့ ဖုန်းခေါ် တာထက် SMS ပဲပို့ကြပါတယ်။
မြန်မာကနေ Starhub websms သုံးပြီး စင်ကာပူမှာ ရှိတဲ့ သမီးဖုန်း ဆီကိုကွန်ပျူတာကတဆင့် sms ပို့လို့ ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဒီနည်းနဲ့ စင်ကာပူမှာ ရှိတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အဆက်အသွယ် မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။ စင်ကာပူမှာ ရှိနေတုံး သမီး Starhub ဖုန်းက ကန်ထရိုက်ရက်စေ့ပါတယ်။ကန်ထရိုက် အသစ်ချုပ်ရင် အခုကိုင် နေတဲ့ ဖုန်းပြန်သွင်းပြီးသူတို့ကျေညာထားတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖုန်း အမျိုးမျိုးထဲ ကကြိုက်တဲ့ဖုန်း ကိုအလိုက်ပေးလဲ လို့ရပါတယ်။ သမီးကလက်ရှိကိုင်နေတဲ့ Nokia N95 ဖုန်းကို Nokia E72 ဖုန်းနဲ့ လဲလိုက်ပါတယ်။ အလိုက်မပေး ရတဲ့ အပြင် ဘောက်ချာ ဒေါ်လာ ၁၀၀ တောင်ပြန်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲတော့ သမီး တို့ ဆီမှာ ၂ နှစ် တစ်ကြိမ် ဖုန်းအသစ် ကိုင်နိုင်တဲ့ အခွင့် အရေးရှိ ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ တစ်ခါသုံးရင် နည်းနည်းပဲကုန်တဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ပေါ်မှာ ပဲ ရိတ်ပြီး ကနဦးပေးရတာတွေ၊ ဖုန်းတန်ဖိုးတွေကို တတ်နိုင်သမျှဖျောက်ထားကြပါတယ်။ စီးပွားရေးဆိုတာဒီလိုတွေးတတ်ခေါ်တတ်မှ သဘိတ်ဝင်အိတ်ဝင် ကိုယ့်အိတ်ထဲဝင်လာမှာပါ။
မြေးလေးကိုဆေးရုံကပေးဆင်းလိုက်တော့အသားဝါဖြစ်နေသေးတယ်။ peak ကမွေးပြီး ၈ ရက်လောက်မှ ရောက်မှာ ဆိုတော့ poly clinic ကို ၂-၃ ကြိမ်လောက်သွားပြရမယ်လို့ ဆရာဝန်ကမှာ လိုက်ပါတယ်။ Clementi ploy-clinic ကအိမ်နဲ့ သိပ်မဝေးပါဘူး။လမ်းတစ်ဖက်ကူးလိုက်ရင်ရောက်နေ ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ မြေးက ရက်သားလေး ဖြစ်နေပြီး အသားဝါဆိုတော့စိုးရိမ်ပြီး အဘိုးကော၊ အဖေကော။ အမေကောအားလုံးလိုက်လာကြပါတယ်။ poly clinic အ၀ရောက်တော့ registration လုပ်တဲ့ machine ပေါ်မှာ သမီး PR မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ကိုရိုက် လိုက်ပါတယ်။ ခလေးကိုပြမှာ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း registration မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ သမီးက မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ရလာပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်တဲ့နေရာရှေ့မှာ စောင့်နေရင်း သမီးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေါ်လာတဲ့အခါ အဲဒီကောင်တာရှေ့မှာ သမီးစာရင်းသွင်းပါတယ်။တွေ့ ရမဲ့ ဆရာဝန်အခန်း သိလာရတော့ အဲဒီအခန်းအရှေ့မှာ သွားစောင့် ရပါတယ်။ သမီးမှတ်ပုံတင်ပေါ်လာတော့ အခန်းထဲတခါးခေါက် ၀င်သွားကြပါတယ်။ မြေးလေးကို စမ်းသပ်ကြည့် ပြီးသွေးစစ် ခိုင်းပါတယ်။ result ရလာရင်ပြန်လာခိုင်းပါတယ်။ သွေးစစ်တဲ့နေရာ ရောက်တော့ ဗမာ nurse ဖြစ်နေပါတယ်။ ခလေးကိုသွေးဖေါက်ယူပြီး ဆရာဝန်အခန်းရှေ့ မှာပြန်စောင့်ခိုင်း ပါတယ်။ ခဏ နေတော့ သမီးမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေါ်လာတာနဲ့ ၀င်သွားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ကွန်ပျူတာကို ကြည့်ပြီး နောက် ၂ရက်နေရင်ပြန်လာဖို့ပြောပါတယ်။ ခလေးရဲ့ သွေး result ကသူ့ ကွန်ပျူတာ စကရင်ပေါ် မှာရောက်နေ ပြီလေ။အသားဝါဖြစ်နှုန်းက နဲနဲစောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်းပြော ပြပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ သမီးကငွေပေးတဲ့ ကောင်တာမှာ တန်းစီပါတယ်။
သမီးအလှည့်ရောက်တော့ ငွေဘယ်လောက်ကျသလဲဆိုတာ ကွန်ပျူတာစကရင်ပေါ်မှာပေါ်နေပြီ။ သမီး ကသူ့ ရဲ့ bank cardထုတ်ပေးလိုက်တော့ sensor မှာ ကုန်ကျတဲ့ ပိုက်ဆံကိုနှုတ်ယူလိုက်ပါတယ်။မြေးလေးကို poly-clinic မှာ လာပြတာ အချိန်မှတ်ထားတော့၄၅ မီနစ်လောက်ပဲကြပါတယ်။ အင်မတန်မှ ကို သက်တောင့် သက်သာရှိပါတယ်။ ဆေးရုံအပေါက်စောင့်လည်း ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘူး။ စမ်းသပ်ခငွေထွက်ယူတဲ့ ဆရာမလည်းမရှိဘူး။အားလုံးကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်သွားကြတာပါ။
မြေးလေးရဲ့ medical record ကလည်း အဲဒီ poly-clinic ကကွန်ပျူတာပေါ်မှာသိမ်းထားပီးပါပြီ။ National University Hospital ဆီ ၂ လပြည့် လို့ follow up သွားပြရင် အဲဒီမှာ ရှိတဲ့ ဆရာဝန်က ကွန်ပျူတာ ပေါ်မှာ ခေါ်ကြည့်ယုံပါပဲ။ ဒါကြောင့် စင်ကာပူ ကပြည်သူတွေရဲ့ လူမှုစီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတွေ အားလုံးဟာ ကွန်ပျူတာတွေပေါ်မှာရှိနေကြပါပြီ။ နောက်၂ရက်နေတော့ ပြန်သွားတဲ့အခါ သွေးတန်းဖေါက်ရ ပါတယ်။ဖေါက်ပြီးတာနဲ့ဆရာဝန်ခန်းရှေ့ စောင့်နေပါတယ်။ ခေါ်တော့ဝင်သွားတော့အသားဝါ ဖြစ်နှုန်း ကျလာ ကြောင်း၊ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့လျှင်ချက်ချင်း poly-clinic ကိုလာပြရန်မှာ ကြားလိုက်ပါတယ်။အမေနဲ့အဖေတို့ ရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွားပြီးဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာအဘိုးတို့မိသားစုအိမ်ပြန်လာကြပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံဟာကွန်ပျူတာ network စနစ် ကို sectors ပေါင်းစုံမှာ အသုံးပြူနေတာဖြစ်တော့ တကယ်လို့များကွန်ပျူတာ networkစနစ် ချို့ ယွင်းသွားခဲ့ ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစာရေးသူခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားနေတာတော်တော် ကြာနေပါပြီ။ ထူးခြားတာက ဒီ networking စနစ် အားလုံး ကို private sector ကပဲလုပ်နေတာပါ။ ဒီအဖြေကို စင်ကာပူ networking ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှာ လုပ်နေတဲ့ တူလေးတစ်ယောက် က စင်ကာပူမှာ networking စနစ် ၄ -၅ ခုလောက် ကိုအရှေ့ နှင့် အနောက်၊ တောင် နှင့် မြောက်ဖြတ်သန်း ပြီး networking ဆွဲထားကြောင်းပြောပါတယ်။တစ်ခုချို့ယွင်းသွားရင်ချက်ချင်းအစားထိုးလို့ ရအောင်လုပ်ထား ကြောင်း ပြောပါတယ်။ဥပမာ မြန်မာ မှာ MPT နဲ့ ရတနာပုံ ရှိနေသလိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ မှာတော့ failed ဖြစ်သွားလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပါတယ်။တလောက အင်တာနက်တွေ crashed ဖြစ်တော့ လေယာဉ် လက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွေ၊ ဟိုတယ်တွေမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာကြုံဘူးပါပြီ။ MPT တို့ ရတနာပုံ တို့ကတော့ သူတိုနဲ့ မဆိုင်သလိုပါပဲ။ စင်ကာပူမှာတော့ မရပါဘူး။ ဒေါ်လာပေါင်းဘီလီယံနဲ့ ချီ ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီး စီးပွားရေးချွတ်ချုံ ကျသွား နိုင်တာကြောင့် တကမ္ဘာလုံး ၀ိုင်းအပြစ်တင်ကြမှာပါ။ တူလေးကလည်းပြောပါတယ်။သူလုပ်ရတာ stress အလွန်များတဲ့ အတွက် အလုပ်ပြောင်းဖို့စီစဉ်နေတယ် လို့ သိရပါတယ်။၈နာရီ shift အချိန်အတွင်း ဖျက်ဆီး ခံရမှုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ system crashed ဖြစ်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ် အတော်တာဝန်ကြီးကြောင်းပြောပြပါတယ်။ မြန်မာ system analyst လေးတစ်ယောက်တာဝန်ကြီးမှု ကိုမြန်မာတွေသိအောင်ပြောပြတာပါ။
Posted by MaungTaing Pin at Monday, April 26, 2010 No comments:
Labels: စင်ကာပူ အတွေ့အကြုံ
လျှပ်တပျက် စင်ကာပူ (၂)
စင်ကာပူမှာ ဘတ်စ်ကားလိုင်းပေါင်း (၁၉၃) ကျော်ရှိပါတယ်။ မီးရထားတွဲ ဆက်သလိုဆက်ထားတဲ့ဘတ်စ်ကား အရှည်ကြီးတွေရှိသလို လန်ဒန်တို့ ဟောင်ကောင်တို့ မှာ တွေ့ ရတဲ့ နှစ်ထပ်ဘတ်စ်ကားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ (ဥပမာ ဆေးရုံ၊ shopping mall) သူတို့ဆီလာလို့လွယ်အောင် shuttle bus ‌တွေစီစဉ် ပေးထားပါတယ်။ ဘယ် MRT သို့မဟုတ် ဘတ်စ် ဂိတ် ကနေဘယ် အချိန်တွေမှာထွက်မယ်၊ ပြန်ရောက်မယ် ဆိုတာ Time Table လေးနဲ့ ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲဒီ Time Table လေးကိုမှတ်ထားလိုက်ရင် တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ အစိုးရကဘက် ပေါင်း စုံကစဉ်းစားပြီး လုပ်ပေးထားတာပဲ။ဒီနေရာမှာ အစိုးရ လို့အလွယ်ပြောလိုက်တာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ institution က senior level, middle level staff တွေစီစဉ်လုပ်ကိုင်ပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအသေးစိပ် လေးတွေကို ဘယ်သူ ကစဉ်းစာ လုပ်ကိုင်ပေးတာလဲ၊ စနစ်ကရှိပြီးသားလား၊ စာရေးသူတို့ မြန်မာတွေစဉ်းစား နိုင်ဖို့ပါ။
စင်ကာပူဘတ်စ်ကားတွေဟာအနောက်နိုင်ငံတွေလိုပဲ public convenient အတွက်သေချာစီစဉ်လုပ်ဆောင် ပေးထားတာပါ။ ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာကြော်ငြာတီဗီတွေ ပြတဲ့ ကားတွေရှိ သလို မရှိတဲ့ ကားတွေလည်းမရှိ ကြပါဘူး။ air con ကတော့ ဘတ်စ်ကားတိုင်းလိုလို ပါကြပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ မျက်စေ့နဲ့ ကြည့် ရင် electrical automation system, electronic system တွေတော်တော်သုံးထားပါတယ်။ စင်ကာပူ ဘတ်စ် ကားလိုင်း ရဲ့ network ကို တစ်နေရာက control system နဲ့ ထိန်းချုပ် ထားတယ်လို့ထင်တာပဲ။ အချိန်လည်းတိကျ မှန်ကန် အောင်လုပ်ထားပြီး ဘတ်စ်ဒရိုင်ဘာတွေကလည်း ကွက်တိဝင်အောင် မောင်းနိုင်ကြပါတယ်။ ဘတ်စ်စီးရတာနဲ့ MRT စီးရတာ နိုင်းယှဉ်ရင် MRTစီးရတာကလွယ်တယ်လို့ထင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ ဘတ်စ်ဒရိုင်ဘာကို ဆင်းချင် တဲ့နေရာရောက်ရင်ပြောပါလို့မှာ ထားရင်ဆင်းရမဲ့ မှတ်တိုင်ရောက်ရင် ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Singlish တော့နားလယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဘတ်စ်ကားဒရိုင်ဘာတော်တော်များများ ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ကြပါတယ်။
MRT လိုင်းပေါင်း ၅ခုရှိပါတယ်။ လိုင်းသစ်တွေလည်းပေါ်လာနေဆဲပါ။ စင်ကာပူမှာ HDB တိုက်ခန်းငှားတဲ့ အ ခါ အောက်ဆင်းလိုက်ရင် MRT ပဲဆိုရင်တော်တော်ကြိုက်ကြတယ်။ဒီ အချက်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ criteria တစ်ခုပဲ။ နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက် ရမယ်ဆိုရင်စလုံးတွေကော မြန်မာတွေကော မကြိုက်ချင်ကြ တော့ဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် HDB ဈေးကတော်တော် ပေါဆိုပဲ။ကံကောင်းရင် MRT လိုင်းသစ်ဖေါက်တာနဲ့ နီးရင် HDB ဈေးကတက်သွားပါလေရော။ ၀ယ်ထားရင် မြတ်ပေမဲ့ ငှားနေရင်တော့ နောက် တစ်ခါ ကန်ထရိုက် စာချုပ်ချု့ပ် ရင်ဈေးတိုးတောင်းနိုင်တယ်။
MRT စီးတိုင်း တွဲတွေပေါ်မှာ မြန်မာလိုပြောဆိုနေတာတွေကြားရတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသားအရွယ် တွေလည်း ကျောင်းသားဘာသာဘာဝဆူညံစွာပြောဆိုနေကြတာလည်းကြားရတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို မြင်ရ တော့ နိုင်ငံရဲ့အနာဂါတ်အတွက် အားတွေပါပဲလို့တွေး မိပါတယ်။အထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တာ မရရင် အပြင်ထွက် လာပြီး ကိုယ်လိုချင်တာ အရယူကြပါ။ အတောင်အလက်စုံရင်ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လိုရပြီ။ တစ်နေ့ကြ ရင်တော့ အမေ့အိမ် ကိုတော့ ပြန်လာကြရမှာပါပဲ။ မပြန်ချင်ရင်လည်း ကမ္ဘာကြီးဟာရွာ ဖြစ်နေပါပြီ။ လူသား တွေအား လုံးအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးယုံမျှ နှင့် တာဝန်ကျေပါပြီ။
လန်ဒန်က underground ကိုအတုယူထားတဲ့ MRT ပါ။စာရေးသူ ယူကေမှာ ကျောင်းတက်တုံးက လန်ဒန်နဲ့ နီးတော့လန်ဒန်ကိုခဏခဏရောက်ပါတယ်။ လန်ဒန်မှာ အေးတော့ သွားရင် လာရင် မြေအောက်ရထား ပဲစီးကြ ပါတယ်။ စင်ကာပူ MRT ကိုလည်းလေ့လာလိုက်တာ နဲ့စီးတတ်သွားပါတယ်။ လမ်းညွှန်တွေက သေချာစွာ ရေးထား ဖေါ်ပြပေးထားတော့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်ရင်မှားစရာမရှိနိုင်ပါ။ MRT ပေါ်မှာထိုင်စရာနေရာရဖို့ မလွယ် ပါ။ အမြဲတန်းမတ်တပ် ရပ်ရပါတယ်။ခလေးအမေတွေ၊သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဆို နေရာ က ထပေးကြတာ တော် တော်များများကြုံတွေ့ ရပါတယ်။
စင်ကာပူရောက်ပြီး ၁၆ရက်နေ့ပဲ ဟိုသွားဒီသွား လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နှစ်ကူးကာလဆို သိန်းအောင် (ကော်ကြီး) လာခေါ်တာနဲ့ ဥာဏ်ဝင်းရွှေအိမ် သွားလည်ကြပါတယ်။ ၂နာရီ လောက်ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် တွေ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ၁၇ရက်နေ့အကူး မနက် ၂ နာရီလောက်ကြတော့ သမီးဗိုက်နာလာပါရော။ သမီးဗိုက်ကို National University Hospital မှာ အပ်ထားတာပါ။ ဗိုက်အပ်တာက package ပါ။ မွေးရင် ဘယ်လိုအခန်းမျိုး မှာနေမယ်ဆိုတာက အစပါတယ်။ သမီးစဗိုက်အပ်တဲ့နေ့ အဲဒီအချိန်က စင်ကာပူ ရောက်နေတော့ အဖေါ်လိုက် သွားဖူးတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ instruction တွေ ရေးပေးထားတယ်။ ရေးပေးထားတဲ့ တယ်လီဖုန်း နံပါတ် ဆက်လိုက်တော့ ဗိုက်နာပုံ နာနည်းကိုမေးတယ်။ ၅မိနစ် တစ်ကြိမ်လောက်ဆက်တိုက်နာမှ ဆေးရုံ ကိုလာပါလို့ တာဝန်ကျဆရာမကပြောတယ်။
ဒါနဲ့ နာတာလည်းဆက်လာရော တက်စီ ကို on call ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အသင့်ထုတ်ထားတဲ့ Suit case သေးလေးကိုယူပြီး ၃ ယောက်သား HDB တိုက်အောက် မှာ တက်စီဆင်းစောင့်နေပါတယ်။ hand phone နဲ့ခေါ် လိုက်တာဖြစ်တော့ တက်စီနံပါတ်ပါတခါတည်းပြောလိုက်တယ်။ ဆေးရုံရောက်တော့ လမ်းညွှန်ထားတဲ့ အတိုင်းပဲ delivery suite ဆီကိုလမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်အတိုင်းပဲလျှောက်သွားကြပါတယ်။ မွေးခန်းထဲကို ခင်ပွန်း ပဲပေးဝင် ပါတယ်။ ဒါနဲ့ visitor lounge မှာသွားစောင့်နေပါဆို လို့ သွားစောင့်နေပါတယ်။ မနက် ၂း၃၀ လောက်ဆိုတော့ ကိုယ်လိုသူလိုဧည့်သည် တစ်ဦးပဲရှိနေပါတယ်။
စေါင့်နေရင်းကနေ နံနက် နေထွက်လာတော့ ဆေးရုံ ၀န်ထမ်းတွေ တဖွဲဖွဲ ရောက်လာပါတယ်။ Breakfast စားဖို့ လိုက်ရှာတော့ဆေး ရုံအောက် ဆုံးထပ်မှာ food stallလေးတစ်ခုတွေ့ပါတယ်။စားစရာလည်းအစုံရပါတယ်။ ကော်ဖီ၊ ပေါင်မုန့်၊ ကြက်ဥကြော်မှာစားပြီး သမီးကတော်တော်နဲ့မွေးအုံးမှာ မဟုတ်တော့ ဆေးရုံ ကိုလျှောက် ကြည့်ခဲ့တယ်။ wheel chair တွေကဆေးရုံအပေါက်ဝမှာတန်းစီထားတယ်။ ကြိုက်သလိုယူသုံးယုံပဲ။ သမီးနဲ့ တူတူလာကြတော့ ညဆိုတော့ wheel chair သုံးရမှန်း မသိပဲ လမ်းလျှောက်လာခဲ့တာ။ မနက်ရောက်တော့ တက်စီပေါ်က ဗိုက်ကြီး နဲ့ဆင်းလာရင် အပေါက် က တာဝန်ကျ က wheel chair တစ်စီးယူပေး တာပဲ။ အတူ လိုက်လာသူကတွန်းယုံပဲ။
ဆေးရုံအောက်ထပ်မှာ pharmacy ဆေးဆိုင်၊ ပန်း၊ get well soon ကဒ်တွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်၊တွေ့ရပါတယ်။ အားလုံးသန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိနေကြပါတယ်။ ဒီဆေးရုံမှာ လည်း shuttle bus ရှိတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ နေ့လည် ၁၃း၂၃ နာရီ မှာ သားဦးလေးကိုမွေးပါတယ်။ ၄ နာ ရီလောက်မှ သမီးတို့မွေးခန်းထဲက ထွက်လာပြီး ward 46 ကိုဦးတည်သွားကြပါတယ်။ အသားလေးနီရဲတွတ်နေတဲ့ မြေးလေးကို ပထမဆုံးတွေ့ ရပါတယ်။ အသားအရေက နီတွတ်နေတော့ အသားဖြူမဲ့ကောင် ပဲဆိုတာသိလိုက်ပါတယ်။ သားဦး ရတဲ့ သားမက် ကတော့ မှိုရတဲ့ မျက်နှာပေါ့။
၅နာရီ ကဧည့်ချိန်တဲ့။ အခုက ၄ နာရီပဲရှိသေးတော့ ငါတို့ ၀င်လို့ ရပါမလားတစ်ထိပ်ထိပ်နဲ့ ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူ ဟာ စည်းကမ်းစနစ်မည်မျှပင် သတ်မှတ်ထားပါစေ။ လူလူချင်းစာနာတတ်ကြပါတယ်။ nurse တွေအားလုံး ပြုံးပြုံးပါပဲ။ ဘယ်သူမှ မောင်းမထုတ်ပါဘူး။ ဗမာဆရာမတွေ ရှိနေတော့ ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမလဲ ဆိုတာ ဗမာ လိုပဲလာရှင်းပြပါတယ်။ ၆ ယောက်ခန်းပါ။ ဆေးရုံကုတင်တွေက အစ အားလုံးခေတ်မီ ကြပါတယ်။ ဆေးရှံ မှာ breakfast, lunch, dinner အကုန်ကျွေးပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့အတွက် menu selection card မှာ ဖြည့်ပေး ရပါတယ်။Nurse တွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်လာပြီး သမီး ကို စစ် ကြဆေးကြပါတယ်။ မြေးလေး ကိုလည်း ခေါ်လာပြီး နို့ တိုက်ခိုင်းပါတယ်။
စင်ကာပူ မှာ cesarian case ဗိုက်ခွဲမွေးတာတွေပဲများတော့ normal delivery ဟာရှားပါးတဲ့ case ဖြစ်နေပါ တယ်။ ဒါကြောင့် မွေးခန်းထဲမှာအလုပ်သင်ဆရာဝန်တွေ၊ အလုပ်သင် nurse တွေတော်တော်များများ လာကြည့် ကြတယ်လို့ သမီး ကနောက်မှ ပြောပြပါတယ်။ ၁၇ ရက်နေ့တစ်ရက်ပဲ သမီး မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်ခဲ့ ပါ တယ်။ ည ၉း၃၀ လောက်ကြတော့ သမီး ဖုံးဆက်ပါတယ်။ မစားချင်မသောက်ချင်ဖြစ်နေတာ ပျောက်သွားပြီ ဖြစ်လို့ nurse မတွေဆီကနေ မိုင်လို နဲ့ဘီစကွတ်တွေ တောင်းစား ရကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့နောက်ရက် ဒန်ဒလွန်ရွက်ဟင်းချိုသောက်ချင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ သားမက်ကိုပြောပြတော့ ကို လူအေး ကို city hall ကမှာ ထားကြောင်းပြောပါတယ်၊ City hall ဆိုတာ ပင်နာဆူလာ ပလာဇာပါ။ စင်ကာပူ မှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ တိုင်းရောက်ဘူးတဲ့ နေရာပါ။
နောက်နေ့ ၁၈ ရက်နေ့ ရောက်တော့ သမီး က စောစော လာခိုင်းပါတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့ ခလေးကို တစ်ရက်စောင့်ကြည့် အုံးမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မအေကိုတော့ ဆင်းချင် ဆင်း နိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်ကြီး ရောင်းလှည့် စဉ်က ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ စိတ်ပူတတ်တဲ့ သမီးက ခလေးဆင်းခွင့် မပြုသေးလည်းသူပါ ဆေးရုံမှာ ဆက်နေမယ် လို့ ပြောပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတာက သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း sms ပို့ ပြီး congradulation လုပ်ကြ နဲ့ အလုပ်အားလို့ ကိုယ်တိုင်လာကြည့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက လာကြည့်နဲ့ ခလေး ကိုကြည့် ပြီး အမျိုးမျိုးဝေဖန်ပြော ဆိုနေကြတာပေါ့လေ။ အဖေ နဲ့တူ တယ်ဆိုရင် အဖေ ကကျေနပ်၊ အမေနဲ့တူတယ်ဆိုရင် လည်း မအေတူသား ကြီးပွားမယ် ဆိုပြီး နှစ်ယောက်လုံးကကျေနပ်နေကြတာ တော်တော်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ရေခြား မြေခြား မှာ သူငယ်ချင်းတွေတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယိုင်းပင်းကူညီဖေးမနေကြတာ ဟာ မြန်မာ ရဲ့ ချစ်စရာ ကောင်း တဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးပါ။သမီး ကကျန်းမာနေတော့ စိတ်ပူပန်မှုသိပ်မရှိတော့ပါ။ NUH ရဲ့ဆက်ဆံမှု ကလည်း နွေး ထွေးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။ သမီးကိုကော ခလေး ကိုကော ဓါတ်ပုံတွေ တဖြတ်ဖြတ်ရိုက် ကြပါတယ်။ ၁၉ရက်နေ့ ကြတော့သက်ဆိုင်ရာက ဆေးရုံကဆင်းခွင့် ပြုပါတယ်။ NUH ကပေးတဲ့ လက်ဆောင် အိတ် လေးဆွဲ လာရင်းဆေးရုံအပေါက်ဝ ဆီလျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၇ ရက်နေ့ ဆေးရုံ လာစဉ်တုံးက လူသား ၃ ယောက်၊ ၁၉ ရက်နေ့ ဆေးရုံ ကနေ taxi နဲ့ ပြန်လာတော့ကားပေါ်မှာ လူသား ၄ ယောက်ဖြစ်နေပြီလေ။
Posted by MaungTaing Pin at Sunday, April 25, 2010 No comments:
မြေးလေးမွေးမှာဖြစ်လို့ စင်ကာပူကို ၂၀၁၀ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ လ တုံးကရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူကို အစိုးရ တာဝန်နဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ သို့သော်လည်းအစိုးရတာဝန်နဲ့ ဆိုတော့ တည်းရတာက ဟိုတယ်မှာ၊ သွားတော့သံရုံးကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ ကား၊ မိုးလင်းမိုးချုပ် တာဝန်နဲ့ပဲအချိန် ကုန်နေရတော့ စင်ကာပူ ရောက်တယ် သာဆိုတယ်၊ စင်ကာပူရဲ့ အတွင်းသဏ္ဍာန်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေ့လာချိန်မရခဲ့ဘူး။ စင်ကာပူကိုစိတ် ၀င်စားနေ တာတော့ကြာပါပြီ။ ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ် ပြီး နိုင်ငံသေးသေး လေးဖြစ်ပေမဲ့ သူတို့ ခေါင်းဆောင်တွေ commercial hub ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ ကြတယ်ဆိုတာ တော်တော်များများလည်းရေးပြီး ကြပါပြီ။ ဖတ်သင့် သလောက် လည်းဖတ်ပီးပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေ နေ့တဒူဝ ဘယ်လိုလှုပ်ရှားသွားလာနေထိုင်ကြ တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မြင်ချင်တွေ့ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။
ပင်စင်ယူပြီးဖြစ်လို့ ဒီတခေါက်စင်ကာပူမှာ ၃ ပါတ်လောက်နေခဲ့ပါတယ်။ သမီးတို့လင်မယားငှားထားတဲ့ Clementi မှာ ရှိတဲ့ HDB တိုက်ခန်းမှာ တည်းခိုခဲ့ရတာပါ။ အသက် ၆၀ကျော်လို့ စင်ကာပူသံရုံးက multiple entry နဲ့ ဗီဇာ ၁ နှစ်ပေးပါတယ်။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကထွက်ကတည်းက လွတ်လပ် ပေါ့ပါးစွာ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခင်အစိုးရတာဝန်နဲ့တုံးက VIP lounge ကနေဗိုလ်လို နက်တိုင်၊business suit စတာတွေဝတ်ပြီး ထွက်ရတာ နဲ့တော့ကွာခြားပါတယ်။ စပို့ရှပ်၊ကာကီဘောင်းဘီရိုးရိုး နဲ့ပြည်သူတွေကြား မှာပြည်သူတွေလိုပဲ လေဆိပ်ထွက်ခွာ ကနေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်က စာရွက်စာတမ်းတွေကိုရုံးက အရာရှိ ကပဲလုပ်ကိုင်ပေးတော့ဘယ်အဆင့်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာမသိဘူး။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတော နဲနဲလွဲချော်တာလေးတွေတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ Silk Air လေယာဉ် ပေါ်တက်ခဲ့ရပါတယ်။
ထုံးစံအတိုင်းပါပဲလေယာဉ်ပေါ်မှာ မြန်မာတွေအများကြီးပါ။ တတ်နိုင်သူတွေနဲ့ လူလတ်တန်းစားမြန်မာတွေဟာ စင်ကာပူ ကိုအိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်သွားလာနေကြပါပြီ။ မိတ်ဆွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး ဆိုရင် ရန်ကုန် က ညပိုင်း ထိုင်းလေကြောင်းနဲ့လိုက်လာ၊ ထိုင်းလေဆိပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာအိပ်၊ နံနက်စောစောထွက်တဲ့ ဘန်ကောက်-စင်ကာပူလေယာဉ်စီး၊ စင်ကာပူ မှာ ဘဏ်သွားတာ၊အခြားတွေ့စရာလူတွေတွေ့ပြီးတာနဲ့ ညနေပိုင်းစင်ကာပူ-ဘန်ကောက်လေယာဉ်စီး၊ ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာ ဆက်ပြီးဘန်ကောက် - ရန်ကုန်ပျံတဲ့ ညပိုင်းလေယာဉ် ကို ဆက်စီး၊ ညပိုင်း ရန်ကုန်ရောက်၊ နောက်တစ်နေ့ နေပြည်တော်တက်၊ အဲဒီလိုစီးပွားရေးလုပ် နေ တဲ့ မြန်မာလူလတ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းအများအပြားရှိနေပါပြီ။
ဗိုက်ကြီးတကားကားနဲ့ သမီး၊သားမက်ကို ချန်ဂီလေဆိပ်လာကြိုနေတာကို immigration ကအထွက်မှာပဲတွေ့ လိုက်ရပါတယ်။ အိတ်ရွေးတဲ့ belt နားသွားစောင့်နေပြီး အိတ်ရောက်လာတာနဲ့ ဆွဲတင်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သမီးကို suit case သေးသေးလေး ဆွဲလာတာတွေ့ရတော့ ဘာလုပ်ဖို့လဲလိုမေးတော့ အချိန်မရွေးမွေးနိုင်တော့ ဗိုက်နာရင် ဘယ်နေရာကဖြစ်ဖြစ်ဆေးရုံ ပြေးလို့ရအောင်လိုအပ်တာတွေထည့်ထားတာတဲ့။ အဖေ trained လုပ်ထားတဲ့အောက်မှာ ကြီးပြင်းလာ ရတဲ့သမီး၊ အဲဒီ လိုစေ့စပ်သေချာစွာ စီမံထားတော့ စိတ်ထဲ မှာအလွန် ကျေနပ်မိပါတယ်။
သားမက်နဲ့အတူ သူတို့သူယ်ချင်းကိုလူအေးလည်း ပါလာတော့အဖေ နဲ့အတူလေဆိပ်မှာဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက်ကြ သေးတယ်။ ချန်ဂီလေဆိပ် taxi stand မှာ သွားတန်းစီပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ စာရေးသူအကြိုက်ဆုံးကတော့ ဘာလုပ်လုပ် တန်းစီရမယ်ဆိုတဲ့ အသိက ပြည်သူအများစုရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်းစီနေရင် ကျော်ဖြတ်ဝင်တဲ့အလုပ်ဟာ ထမင်းစားရေသောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်း ကိုလည်း စာရေးသူ ရေးဘူးပါ တယ်။လေ့လာကြည့် လိုက်တော့ ဒီလိုလူတွေဟာအများစုကအောင်ခြေလူတန်းစားတွေ များပါတယ်။ စင်ကာပူမှာလည်း Today သတင်းစာဝေနေတုံး ကြားဖြတ်ဝင်ပြီးသတင်းစာယူတာမျိုးတွေ့ ကြုံဘူးပါတယ်။ ဝေနေတုံးဆိုရင်တော့ သတင်းစာဝေနေတဲ့ senior citizen ကမပေးပါဘူး။နောက်မှာသွားတန်းစီခိုင်းပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ နောက် ကနေ တရုတ်လိုဆဲနေနေ လုပ်တဲ့သူကတော့ခပ်တည်တည်ပါပဲ။ မကြားချင် ယောင် ဆောင်နေပြီးထွက်သွားတာများပါတယ်။ ကိုယ်ထိ လက်ရောက်လုပ်တာမျိုးတော့ မတွေ့ခဲ့ ရပါဘူး။
သမီးတို့ HDB တိုက်ခန်းက bedroom ၂ ခန်း နဲ့ အခန်းသေးသေးလေးတစ်ခန်း ပါပါတယ်။ မီးဖိုခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း အိမ်သာကတော့ compulsory ပါ။ အိပ်ခန်းသေးလေးတစ်ခုကိုတော့အိမ်ရှင်က သော့ခတ်ထား ပါတယ်။အိမ်လခ ကစင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၆၀၀ ပါ။သမီးတို့ကတစ်ခန်းကိုပြန်ငှားထား ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ မကြာခင်တတ်ပေးတော့မဲ့ အင်တာနက်၊တယ်လီဖုန်း၊တီဗီလိုင်းပါတဲ့လိုင်းလိုမျိုး စင်ကာပူ က HDB တိုက်ခန်း တွေမှာ ရှိတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုshare လုပ်ကြပါတယ်။furnished home လို့ ဆို နိုင်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာ၊ အ၀တ်လျှော်စက်၊ oven, water heater, air con: စတဲ့ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း တွေထားပေး ပါတယ်။ဒါတောင် full furnished မဟုတ်သေးပါ။ ဧည့်ခန်းသုံး ဆက်တီ၊ တီဗီတွေပါထားပေးရင် ၁၈၀၀ တောင်းတာနဲ့ မယူတော့ ဘူးပြောခဲ့ရတယ်လို့ သမီးက သူ့အတွေ့အကြုံကို ပြန် ပြောပြ ပါတယ်။
Clementi block 427 အောက် လမ်းတစ်ဘက်ကူးလိုက်ရင် wet market, နဲ့ ဆိုင်တွေရှိ ပါတယ်။ ဗမာ စားသောက် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကဗမာ ထမင်းဟင်း ရောင်းပါတယ်။ သမီးတို့အတွက် ဟင်းမချက်နိုင် ရင် ၀ယ် စားလိုက်ယုံပဲ။ တော်တော် အဆင်ပြေပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ hawker centre လို့ခေါ်တဲ့ စားသောက် ဆိုင်တွေ HDB အဆောက်အဦး တွေအောက်မှာ ရှိပါတယ်။ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ အစား အသောက်မျိုးစုံ ကိုရောင်းချပါတယ်။ တရုတ်စာ၊ကုလားစာ၊မလေးစာ၊အကုန်ရတယ်။အချို့သော hawker centre တွေဟာ ၂၄ နာရီ ညလုံးပေါက် ဖွင့်ပါတယ်။နောက်စင်ကာပူသားတွေအမြဲဝယ် လေ့ရှိ တဲ့ FairPrice ဆိုင်တွေကလည်း နေရာတကာမှာရှိပါတယ်။
စင်ကာပူရောက်တာနဲ့ မနက်ဖက် ဘယ်မှာလမ်းလျှောက်ရမလဲဆိုတာသားမက် ကိုမေးကြည့် တော့အိမ်နားမှာ ပြေးလမ်း၊ဘောလုံးကွင်းပါတဲ့ stadium တစ်ခုရှိတယ်လို့သိရတယ်။ ဂုံးကျော်တံတားကျော်လိုက်တာနဲ့ stadium ကိုတွေ့နေရတယ်။ ဆရာဝန်က မနက်တိုင်း မှန် မှန်လမ်းလျှောက်ခိုင်းထားတော့ ရန်ကုန်မှာကတည်း ကမှန်မှန်လမ်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူ ရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက် မနက် ၆ နာရီလောက်ထသွားတော့ ပြေးလမ်း မှာ ပြေးသူတွေပြေး၊ လမ်း လျှောက်သူတွေလျှောက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ stadium ရဲ့ မလွယ် ပေါက်မှာ နံနက် ၄း၃၀ နာရီကစပြီး မလွယ်ပေါက် တံခါးကိုဖွင့်ပေးထားကြောင်း စာရေးထားတာကို ဖတ်ရပါ တယ်။ တံခါးကို timer နဲ့အချိန်ကိုက်ဖွင့်ပေးထားတာနဲ့တူပါတယ်။လူလာဖွင့်တာတော့မဖစ်နိုင်ဘူး။ စင်ကာပူမှာ နေခဲ့တဲ့ ၃ ပတ်လုံးလုံးပဲနနက် ၆ နာရီအရောက်သွားပြီး၁နာရီလမ်းလျှောက် ကျန်းမာရေး လေ့ ကျင့်ခဏ်း လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သမီးကအဖေ ကို MRT ကော၊ဘတ်စ်ကားကောစီးလို့ရတဲ့ e-link card လုပ်ပေးထားပါတယ်။ လသုံးကတ်လိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီကတ်က ကုန်သွားရင် ပြန်ဖြည့် လို့ရတယ်။ ကုန်မကုန် ကိုလည်း စက်မှာ check လုပ်လို့ ရတယ်။ ၁၅ နှစ် ခံတယ်လို့ ကျေညာထားတယ်။ ဒီကတ်ကိုပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့် ထား၊ MRT လိုင်းဝင် တာနဲ့ sensor ပေါ် ပိုက်ဆံအိတ်တင်လိုက်ယုံပဲ။ ကတ် ထုတ်စရာမလိုဘူး။sensorဆွဲအားတော်တော် ကောင်း တယ် လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်လည်း အ၀မှာ ရှိတဲ့ sensor မှာပိုက်ဆံအိတ် ကိုကပ်လိုက်ယုံပဲ။ “တီ” ကနဲအသံထွက်လာရင် ဘတ်စ် ကားခပေး ပြီး ပြီဆိုတာဒရိုင်ဘာ ကသိလိုက်ပြီ။ အဆင်းကြရင်လည်း ပိုက်ဆံအိတ်ကပ်လိုက်ယုံပဲ။ ဘယ်မှာ ဆင်းလဲ ဆိုတာ chips မှာပေါ်နေတော့ ကျသင့်ငွေ ကိုဖြတိ လိုက်ပါတယ်။ လပေးမဟုတ်ပဲ ဘယ်ကနေ ဘယ်သွားမယ်ဆိုရင် တစ်ဒေါ်လာ deposit တင်ပြီး လက်မှတ်ဝယ်လို့ရတယ်။ လမ်းဆုံးကြ ရင် ကိုယ်ပေးထားတဲ့ deposit တစ်ဒေါ်လာ ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ယုံပဲ။ အချို့ ကကားပေါ်မှာ လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ စက်မှာ ငွေအကြွေတွေထည့်ပြီး လက်မှတ်ဖြတ်ကြတယ်။ ဘတ်ကားကို ဒရိုင်ဘာကပဲ ထိုင်ရာ မထ လက်မှတ်ရောင်းတာဝန် ကောတခါးအဖွင့် အပိတ်၊ စတဲ့ တာဝန်ပေါင်းများစွာကို သူတစ်ယောက် တည်း ကပဲလုပ်ပါ တယ်။
မသန်မစွမ်းသူတစ်ယောက်ကားပေါ်တက်မယ်ဆိုရင် ဒရိုင်ဘာကိုယ်တိုင် ထိုင်ရာက ထပြီး wheel chair ကိုတင်ပေး တယ်၊ခေါက်ပေး ပါတယ်။ ဆင်းတော့ လည်း ထိုင်ရာက ထပြီး ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးကြတာကိုတွေ့ ရပါတယ်။ နိုင်ငံကြီးသားပီသတဲ့ အပြုအမူတွေဟာချစ်စရာအတော်ကောင်းပါတယ်။ စင်ကာပူ ဟာ ပြည်သူ့နီတိ (moral) နဲ့ပတ်သက်လို့ တော်တော်လေ့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ကျောင်းတွေမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာစာရေးသူ မသိသေးပေမဲ့ ပြည်သူအများစုကတော့ လိုက်နာလုပ်ဆောင်နေတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ စာရေးသူတို့ ငယ်ငယ်က စိန် ပီတာကျောင်းမှာ moral ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ် ကသင်ရိုးအချိန် ဇယား မှာ တစ်ပတ် ၂ - ၃ ကြိမ်လောက်ပါ ပါတယ်။ စာမေးပွဲ မရှိ လို့ကျောင်းသားအများ စုကစိတ်သိပ်မ၀င်စား ကြပေမဲ့ သင်တဲ့ သူကကောင်းရင် ခေါင်းထဲမှာ စွဲသွားပါတယ်။အဲဒီအချိန် ကတော့ moral နဲ့ physical Fitness training တစ်လှည့် စီဆိုတော့ အပြင်ထွက် လတ်ယားလတ်ယားလုပ်ရတဲ့ physical training ကိုကျောင်းသား အများစု ကကြိုက်ကြတာအမှန်ပါ။
နှစ်ပေါင်း ၄၀- ၅၀ ကျော် လုပ်ရကောင်းမှန်းမသိကြပဲ ပြည်သူနီတိ ကိုသင်ရိုး တွေကနေုပစ်ပယ်ထားကြတော့ မြန်မာပြည်သူ အများစုဟာ နိုင်ငံတကာစံချိန်တွေနဲ့ ယှဉ်ရင်သူများနောက်ရောက်နေကြတာကိုတော့ မငြင်းနိုင် ပါ။ ဒါကိုထောက်ပြတော့ အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းတဲ့ ကောင်လို့များပြောကြမလားမသိပါ။
Gallstones ရှိနေသူများအတွက် ဆေးနည်းကောင်းတစ်ခု
Gallstones နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရောဂါခံစားနေရသူများအတွက် Gallstones removal နည်းလမ်းကောင်းလေး ကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပျောက်ကင်းခဲ့ပါတယ်။ လက်လှမ်းမီသမျှ သူငယ်ချင်းအချို့ ကိုဒီနည်းလမ်းပေးခဲ့ရာ ပျောက်ကင်းသွားကြကြောင်း သတင်း ပြန်ပေးကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို စိန်အုန်း ဆီက ရပါတယ်။ သူ့ဇနီး ဒေါက်တာနုနုမော် ဆီကရတာပါ။ သူကိုယ်တိုင်အရင်မစမ်း သေးပဲ ကျွန်တော် ကို အရင် စမ်းခိုင်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပျောက်ပြီဆိုမှ သူစမ်းပါတယ်။သူကတော့ ဆရာဝန်မ ယောင်္ကျားဆိုတေ့ာ ultra sound တွေဘာတွေရိုက်ပြီးမှ စမ်းတာပါ။ သူလည်းပျောက်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံစားနေရတဲ့ မျောက်ဖြူ စိုးမြင့် ကို ဒီနည်းလမ်းအရင်ပေးပါတယ်။ သူလည်း စနစ်တကျစမ်း သပ်ပြီး ပျောက်သွားပါ တယ်။ အခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်း ဆော်သြရေးမှုး WHO ၀င်းထ်ိန်ဦး ကတဆင့် ဖြန့်ဝေထားပါတယ်။ RIT ကသူငယ်ချင်း တွေသာမက အခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းသိရအောင် သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
This isauseful piece of information that you may have received before. This is true and it works. You can 'google' Dr Lai Chiu-Nan to find out more about her and the feedbacks of this treatment. ps. as always, spread the good things Pictures first, explanation and procedure follows:
It has worked for many. If it works for you please pass on the good news.
Chiu Nan is not charging for it, so we should make it free for everyone. Your reward is when someone, through your word of mouth, benefits from the regime.
Gallstones may not be everyone's concern. But they should be because we all have them. Moreover, gallstones may lead to cancer. "Cancer is never the first illness," Chiu Nan points out. "Usually, there arealot of other problems leading to cancer. In my research in China , I came across some materials which say that people with cancer usually have stones. We all have gallstones. It'samatter of big or small, many or few. One of the symptoms of gallstones isafeeling of bloatedness afteraheavy meal. You feel like you can't digest the food.. If it gets more serious, you feel pain in the liver area." So if you think you have gallstones, Chiu Nan offers the following method to remove them naturally.
PS. 1cup=250ml, 1/2 cup lemon juice=3 lemons (aprox.)
၀မ်းနှင်အတူပါလာသော gallstones များ
မီလီမီတာ နှင့် အရွယ်အစားကိုတိုင်းပြထားပုံ
ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ချက်အရ ၀မ်းနှင့် အတူကျဆင်းလာသော gallstones
Posted by MaungTaing Pin at Friday, April 23, 2010 No comments:
မြေးလေး ပုလုံး ၂ လ ပြည့် ပြီ
ံHappy Family of Soe Moe, Mon Mon n Lin Myat
Happy Family of Soe Moe, Mon Mon and Lin Myat
အင်ဂျင်နီယာ အိုကြီး ပင်စင်မယူခင်တုံးက စိတ်ကူးမိခဲ့ဘူးတာတွေတကယ်ပင်စင်ယူတော့ဘာမှ မလုပ် ဖြစ်တော့ ဘူး။ ပင်စင် ယူရင်စာဖတ်မယ်၊ စာရေးမယ်ဆိုတာ စိတ်ပဲရှိတော့တယ်၊တကယ်နောက်ကလိုက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုမြေးလေး တစ်ယောက်ရတော့ ပိုဆိုးသဗျာ။ နောက်တစ်ခုတော်သေးတာက ၀ိပသာနာ တရား ကိုအလှမ်း ဝေး ပြီလို့ ထင်ခဲ့ တာ ပင်စင်ယူပြီး မှ မှန်မှန် လုပ်ဖြစ် ခဲ့တာ ကိုတင်ဦးကျေးဇူးကြောင့်ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလက အင်ဂျင်နီယာအိုကြီး စင်ကာပူမှာရောက်နေပါတယ်။ မြေးလေး မွေးမှာ ဖြစ်လို့ မအေ မရှိတော့တဲ့သမီးကို လာအားပေးစောင့်ရှောက် ဖို့ရောက်နေတာပါ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ မြေးလေး လင်းမြတ်အောင် ကို စင်ကာပူ National University Hospital မှာမွေးပါတယ်။မနက် ၂နာရီလောက်သမီး ဖြစ်သူ ဗိုက်စနာတော့ ၃ယောက်သား NUH ကို taxi ခေါ်ပြီး ချီတက်သွားကြပါတယ်။တိုတိုပဲပြောကြပါစို့၊နောက် ၂ ရက်ကြာ ၁၉ ရက်မှာ ဆေးရုံ ကနေဆင်းလာတော့ taxi ပေါ်မှာလူသား ၄ ယောက်ဖြစ်နေပြီ။
ဒီနေ့ဆိုရင် မြန်မာ နှစ်ဆန်း ၁ ရက် မြေးလေး ပုလုံး ၂ လ ပြည့်ပြီ။ ပုလုံးလေး လူလောက ရောက်လာပြီး ဘိုးဘိုး ကို ခဏပဲတွေ့လိုက်ရ ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ခေတ် ကြီးကကွန်ပျူတာခေတ်မဟုတ်လား ? ပုလုံးလှုပ်ရှားမှု ကိုနေ့ တိုင်း နီးပါးပဲ ကွန်ပျူတာ စကရင်ပေါ်မှ ဘိုးဘိုးတွေ့နေ ရတယ်လေ။ညတိုင်းလိုလိုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အင်တာနက် အဆက်အသွယ်ကောင်းပါစေလို့ စိတ်ထဲမှာ ဆုတောင်းရတာအမော။ MPT ကကိုယ်ရွှေ သားကောင့်သား လိုင်းမင်းလေးကို လည်း ADSL လိုင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့ ဖုန်းလိုင်းကောင်းအောင် လုပ်ထားဖို့စောင်မ ကြည့်ရှုထားရ တာပေါ့လေ။ တော်သေး ရဲ့ကောင်လေး ကအင်တာနက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ အမယ်လေး သြစတေးလျ က အသက်၅၀ ရှိတဲ့ အဖွားကြီးနဲ့နေ့တိုင်း on line ဂိမ်းကစားကြတယ်ဆိုပဲ။ ကျေးဇူးရှင်လေး-- သင်္ကြန် တွင်း တစ်တွင်း လုံး အင်တာနက် အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ဘူး။ သူ့ကိုရှာချင်ရင် အိမ်နားကအင်တာနက် ကဖေးဆိုင်မှာ ရှာရတယ်။ အဲဒီလိုပဲသားသားရဲ့ ဘိုးဘိုး တို့နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအားလုံး နဲ့ အဆင်ပြေအောင်နေတတ်ကြဖို့ လိုတယ်လေ။ သားသားပုလုံးနဲ့ ဘိုးဘိုး တို့ လူကိုယ်တိုင်မတွေ့ ရပေမဲ့ virtually ကွန်ပျူတာစကရင်ပေါ် မှာတွေ့ ရပါတယ်။
ကွန်ပျူတာစကရင်ပေါ် ကဘိုးဘိုး အကြိုက်ဆုံး ပုလုံး အီးအီးညှစ်နေပုံ
ပုလုံး လေး ကိုမေမေချီထားရင် မေမေ မျက်နှာကို မှတ်မိအောင်ကြည့် ကြည့် နေတာ ကိုဘိုးဘိုးကွန်ပျူတာ စကရင်ပေါ်မှာတွေ့နေတယ်လေ။ မေမေငယ်ငယ်တုံးက သားသားပုလုံး ဘွားဘွား ရှိနေတော့သူကပဲ မေမေ ကို အနီးကပ်စောင့်ရှောက် ခဲ့ တယ်။ ၁၉၉၃ုခုနှစ်ဘွားဘွား ရုတ်တရက်ဆုံးသွားပြီးမှဘိုးဘိုး ပဲမေမေ ကို အမေ လိုတစ်မျိုး အဖေလိုတစ်မျိုးစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်၊စည်းကမ်းစနစ် ကျကျနေတတ်အောင်သွန်သင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ထက်ဆင်းရဲ တဲ့ တစ်ဖက်လူသားတွေ ကို မေတ္တာထားတတ်ဖို့၊ ဘာသာတရားအလေးထားတတ်ဖို့၊ကိုယ့်ကို bully လာလုပ်ရင်မခံဖို့၊ ငွေကြေးကိုစနစ်တကျသုံးစွဲတတ်ဖို့၊ ပညာ ကိုတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့၊ ဒါတွေကိုဘိုးဘိုး သင်ခဲ့ ရတယ်။ ကံအားလျော်စွာပဲ သားသား မေမေ က လိုက်နာခဲ့ လို့ ဒီကနေ့ သားသားမေမေ ဟာ ဘိုးဘိုး လိုပဲ ဘွဲ့ ၂ ခုရှိတဲ့ ပညာတတ် professional သမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။
သားသား မေမေ က အမေ့မေတ္တာကို အသက် ၁၇နှစ် သမီးအထိရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဘိုးဘိုးကပဲ အဖေ့မေတ္တာကော အမေ့မေတ္တာကောသားသား မေမေ ကိုပေးခဲ့ရတာ ဒီနေ့ထိ ပဲဆိုပါတော့။ ဒီကနေ့ထိ သားသား မေမေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပဲ ပုလုံးလေး လူလောကရောက်ခဲ့တာပါ။ ဘိုးဘိုး ကဘေးကကြည့်နေပြီး သားသားဖေဖေ နဲ့ မေမေ ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပါ တယ်။ ဘိုးဘိုးက သားသားဖေဖေ
နဲ့ မေမေ တို့ ရဲ့ လုပ်ပုံ ကိုင်ပုံ တွေးပုံခေါ်ပုံတွေအပေါ် ယုံကြည်ပြီးသားလေ။
သားသား အီးအီးညှစ်နေတဲ့ပုံ ကို ဘိုးဘိုး ရဲ့ ကွန်ပျူတာစကရင် ပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ ဘိုးဘိုးသဘောကျလွန်း လို့။ အားနဲ့ မာန်နဲ့ ညှစ်နေတာလေ။ သားသား ရဲ့ ဘွားဘွား ကလည်း သားသားမေမေ ငယ်ငယ် တုံးက အီးအီး ပါနေတဲ့ ပုံကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ထားတယ်လေ။
ဘိုးဘိုးယုံကြည်ပါတယ်။ သားသားမေမေ ဟာသူလျှောက်ခဲ့တဲလမ်းအတိုင်း ပုလုံးကို လျှောက်ခိုင်းမှာပါ။ ပုလုံးစည်းကမ်းနဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်အောင် သွန်သင်ဆုံးမ မှာပါ။ မြေးလေးလူလောကထဲရောက်လာတော့ ဘိုးဘိုး ရဲ့ ဘ၀အနေအထိုင်လည်းပြောင်းသွားတယ်။ မြေးမရခင်ကတော့ မြေးတွေကို သဲသဲလှုပ်ဖြစ် နေတဲ့ အဘိုး အဘွားတွေကို နည်းနည်းပဲနားလယ်ခဲ့တယ်။ ဘိုးဘိုး ကိုယ်တိုင် မြေးလေး ပုလုံး ရလာတော့ သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေပြီ။ တစ်ဖက် ကအချိန်ကျလို့ on line မ၀င်သေး ရင် ဘိုးဘိုးက ဒီဖက်မှာ သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေပြီ။ Starhub, websms နဲ့ On line ၀င်ခိုင်းရတယ်။ VZO ၀င်မရရင် ရတနာပုံ ကို ကျိန်ဆဲ တဲ့နေ့ပဲ။ ဒါတွေဟာ တစ်ဖက်မှာသဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဘိုးဘိုးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့။ ဘေးကထိုင်ကြည့်နေရင် တော်တော် ရီစရာ ကောင်းမယ်။ တခါတခါ သားသား ဘွားဘွား များ ထိုင်ကြည့် ရီနေမလား မသိဘူး။
ပုံ VZO ပေါ်ကရိုက်ထားတာ ပုလုံး မေမေ ကို မှတ်မိအောင်ကြည့်နေတယ်လေ
၁၆-၀၄-၂၀၁၀ နေ့က မေမေ ရိုက်ထားတဲ့ ပုလုံး လေး
သားသားကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ရှိနေအောင် နေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှား ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ သားသားဖေဖေ နဲ့ မေမေ ကို ဘိုးဘိုးကကျေးဇူးတင်တယ်။ သားသားမေမေ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ခရီးတစ်လျှောက်ကို ကြည့်ခဲ့ရင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်းရှိခဲ့လို့ပုလုံး လေး ကိုလည်း အဲဒီလိုလျှောက်လှမ်းနိုင်အောင် ဖေဖေ နဲ့ မေမေ တို့ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေလို့ ဘိုးဘိုး ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by MaungTaing Pin at Saturday, April 17, 2010 No comments:
Labels: ဘိုးဘိုး နှင့် မြေး
အင်ဂျင်နီယာ အိုကြီး ရဲ့ ပီတိ
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရပ်ကွက်တစ် ခုလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ၉ မ်ိုင် မရမ်းကုန်း မစိုးရိမ်ကျောင်းလမ်းမှာ စာရေးသူ နေပါတယ၊် အကောင်းဆုံးဆိုတာကို အဓိပ္ပယ်ဖွင့် ဆိုရရင် မီးမပျက်တာပါ။ မီးအပျက်နည်းတာပေါ့။ ဒါက အရင် ကပါ။ မြို့တော်ကိုနေပြည်တော် ပြောင်းလိုက်ပြီး ကတည်းက စာရေးသူတို့ ရပ်ကွက်ဟာ grade ကျသွားပါတယ်။ တစ်မြို့ လုံးမီးအားကျတော့စာရေးသူတို့ ရပ်ကွက်လည်းမီးအားကျသွားပါတယ်။ လစဉ်သုံးဘတ်ဂျက် လည်းတော် တော်ခိုက်သွားပါတယ်။ မီးအားကျလေ့ မရှိတော့ ရေခဲသေတ္တာ၊ အ၀တ်လျှော်စက်၊ တီဗီ တွေကိုAVR ( auto voltage regulator) မခံထားမိတော့ power ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလောင်ကုန်ပါတယ်။ တချို့လည်း အသစ်လဲ လိုက်ရပါတယ်။ စက်အလိုက်ကိုက်ညီတဲ့ AVRတွေလည်း ၀ယ်တတ်လိုက်ရပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာအိုကြီး အိမ်မှာ တစ် လတစ်လ ရှင်းရတဲ့ မီတာခ က သောင်းကျော်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာ ပီပီ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစား၊တွေးခေါ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရတာပေါ့။ စဉ်းစားမိတာက solar power ပဲ။ နေပြည်တော် တက်သွားရင် ရန်ုကုန် က ၃ မိုင်မှာ solar hut ဆိုတာတွေ့နေရတော့ တစ်ရက်ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အင်း အိမ်မှာ solarသုံးပြီး လုံချုံရေးမီးတွေ အတွက်သီးခြား လုပ်လိုက်ရင် မီတာတော့ ရော့သွားနိုင်ရဲ့ လို့
စိတ်ကူးမိတာနဲ့ အင်တာနက် websites တွေမှာ လက်လှမ်းမှီသလောက် ရှာဖွေ ဖတ်ကြည့်မိတယ်။
Leonics ဆိုတာတွေ့တယ်။ ဆိုလာ panel တွေကတော့ တရုတ်လုပ်က သိပ်မခံဘူးဆိုတာသိခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ kyocera ကိုတွေ့လာတယ်။ ဈေးတော့ကြီးတယ်။ အတွက်အချက်လုပ် ကြည်ပြီး လိုအပ်တာတွေဝယ်လိုက်တာ ၆သိန်းကျော်လောက်ကုန်သွားတယ်။ လုပ်ငန်း workshop တစ်ခု ရှိ တဲ့ မိတ်ဆွေ ကိုတင်ဦး ကို solar panel ထောင်ဖို့ frame တစ်ခု လုပ်ရာမှာ ကူညီဖို့ မေတ္တာရပ်ခံရတယ်။ ပုံကြမ်းဆွဲပေးလိုက်တော့ သူ့ အင်ဂျင်နီယာ တွေ လုပ်လာတာက ကိုယ်လိုချင်တာနဲ့ ကွက်တိပါပဲ။
ကိုတင်ဦး က ဆရာရယ် စဉ်းစားပါအုံး၊ အခုအချိန်အထိ ရန်ကုန်မှာ လျှပ်စစ် က မီးထက်ဘယ်ဟာမှ အကုန်အကျ မ သက်သာဘူး၊ generator သို့မဟုတ် inverter နဲ့ က ပို သက်သာမလားဆရာ။ ဆရာသေချာကော တွက်ပြီးပြီ လား၊ security light ကို solarလုပ်ကာမှ အကုန်အကျများနေအုံးမယ် လို့ ပြောပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာရေးသူ ကအာအိုင်တီ ကျောင်းဆင်းအင်ဂျင်နီယာ အိုကြီး မဟုတ်လား ? ခေါင်းမာတဲ့နေရာမှာ ၂ယောက်မရှိဘူး။
ဟေ့ကောင် မင်းဘာသိလဲ ? နေ့ခင်း inverter သုံးရအောင် ၁၂ ရာသီမီးပျက်နေတာ ဘက်ထရီ အားသွင်းရ အောင်နေ့ ခင်းဘယ်မှာမီးလာလို့လဲ၊ generator က အိမ်မှာ မိန်းမတွေချည်းပဲ။ ငါတစ်ယောက်ပဲ ယောင်္ကျား ရှိတာ၊ ဘယ်သူ generator နှိုးပေးမလဲု solar power သုံးတာအကောင်ဆုံးပဲ။ကိုတင်ဦး အာအိုင်တီ ဆင်း အင်ဂျင်နီယာ ပါပဲ။ စာရေးသူ ကအပြောမခံတော့ ဘာမှ မပြောတော့ပဲ လိုတာတွေလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆိုလာပရိုဂျက်ကြီးပြီးသွားပြီဆိုပါတော့။ ရက်တစ်ရက်ညနေပိုင်းနေ၀င်ပြီး အမောင်ထုသမ်းနေ ချိန်အိမ်နားနီး ချင်းတွေ၊ အိမ်သားတွေ လျှက်စစ်မီး လာဖို့ မျှော်နေချိန်ပေါ့။ မြ၀တီ က ကိုရီးယား အခန်းဆက် ကားလာချိန် နီးနေပြီ လေ။ ပူအိုက်တော့ ခလေးတွေအိမ်ပြင်ထွက်နေတာပေါ့။ အဲဒီချိန်မှာ solar panel ကနေ လျှပ်စစ် ဓါတ်အား တွေ ၀င်ထားလို့ အားတွေပြည့်နေတဲ့ ဘက်ထရီ နဲ့ inverter ကတဆင့်ဂိတ်မီးတွေ လုံချုံရေးမီးတွေ ဖွင့် လိုက်တာပေါ့။ ဂိတ်မီးတွေလင်းသွားတော့ ကစား နေကြတဲ့ ခလေး၊လူကြီးတွေ " မီးလာပြီဟေ့ " ဆိုပြီး အိမ်တွေထဲ ပြေးဝင်သွားလိုက်ကြတာ " ဟေ့ ဟေ့ မလာသေးဘူး ဒါဆိုလာမီးကွ " လို့ ပြန်အော်ရတယ်။
အဲတော့ ကိုတင်ဦး ကိုပြောချင်တာ က ဆိုလာမီး ကသက်သာသလား ၊ လျှပ်စစ် ကမီး ကသက်သာသလား inverter ကသက်သာသလား ဆိုတာအသာထား၊ သူများအိမ်တွေ မီး မလာချိန်မှာ ကိုယ်က သဘာဝ နေရောင် ချည်သုံး လျှပ်စစ် ကနေ မီးလင်း နေတဲ့ " ပီတိ " ဟာ ဘာခံစားချက် နဲ့ မှ မတူတဲ့ အင်ဂျင်နီယာအိုကြီးရဲ့ ခံစားချက် ပါခင်ဗျား ---
Posted by MaungTaing Pin at Monday, April 05, 2010 No comments:
အကြိုက်ဆုံး ဘလောဂ် များ
နိုင်ငံတော်အသစ်တည်ဆောက်နေချိန်မှာပြုပြင်သင့်တာတွေ၊ပြည်သူများအတွက်အနှောက်အယှက်အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်တာတွေ၊အခြားနိုင်ငံတွေကအတုယူစရာတွေ၊မိမိစိတ်ခံစားချက်တွေ၊အတွေအကြုံတွေ၊ကုိုမျှဝေနိုင်ရေးအတွက်လွတ်လပ်စွာရေးသားဖေါ်ပြခွင့်ရှိနေသည့် blog ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၀န်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေး (2)
confidence n over confidence (1)
EQ ကအရေးပိုကြီး (1)
Facebook Notes များ (1)
invest in Myanmar (3)
MAPT ဆန်စပါးအကြောင်း (1)
other blog like to share (3)
reform ဆောင်းပါး (1)
RIT အကြောင်းဆောင်းပါး (2)
social media မှ စုံစီနဖါ (1)
Townhall meeting NYDC (1)
ကိုဗဈ အခွအေနေ (1)
ကုန်သွယ်လယ်ယာ မီးလောင်တဲ့ ည (1)
စင်ကာပူ နဲ့ meritocracy (1)
စင်ကာပူ နဲ့ စည်း ကမ်း (1)
စင်ကာပူ ပညာရေး (1)
စင်ကာပူ အတွေ့အကြုံ (12)
စတိုရီ ၂ ပုဒ် (1)
စီးပွားရေး နဲ့ သတင်းအချက်အလက် (1)
စီးပွားရေး နဲ့ ငွေရေးကြေးရေး (1)
ဆန်အကြောင်း သိကောင်းစရာ (4)
ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဆောင်းပါး (1)
ဖွံ့ ဖြိုးရေး (1)
ဗျူရိုကရက် နဲ့နိုင်ငံရေးသမား (1)
ဘဏ်တွေ တိုးတက် ဖို့ (1)
ဘိုးဘိုး နှင့် မြေး (8)
ဘိုးဘိုး နှင့် မြေး (1)
ရုပ်ရှင် ရီဗြူး (2)
ရိုးရာ ပုံပြင် (1)
လုပ်ငန်းမှာ စနစ်အရေးကြီးဆုံး (1)
သမီး အတွက်မွေးနေ့ လက်ဆောင် (1)
သံဝေဂ (ပြည်သူအချစ် နှင့် ပြည်သူအမုန်း) (1)
ကျောင်းသားဘ၀ ဆောင်းပါး (4)
မြေး နှင့်ဘိုးဘိုး (1)
မြေး နှုင့် ဘိုးဘိုး (1)
JICA ခြေးငှေ ဒျေါလာသနျး ၂၈၀ နီးပါးယူဖို့ ပွညျထောငျစုလှတျတျောမှာ ဆှေးနှေး